kaadị-eto Eto - Blockchain News
Ka 13, 2018 admin
Popularity cryptocurrencies, ruru dị akpịrịkpa, na na nnọọ umengwụ ma ọ bụ dị nnọọ akọ uzo a okirikiri na party. Ọ na-enyo na nkwuwa okwu na ịnọgidesi ike na-egosi bụghị nanị site na-azụ ahịa na investors na iri puku kwuru iri afọ nke trading ahụmahụ na mgbanwe, ma site na nkịtị afọ iri na ụma.
Modern ụmụ a mụrụ digital afọ, ha na-gburugburu nile di iche iche nke Ngwa kemgbe ha bụ nwata, na ha na-amalite na-ekwurịta okwu na kọmputa tupu ọgbọ ndị gara aga. Site na nwata, ha nwere dị otú ahụ nkwurịta okwu ohere a na rọrọ nke ọgbọ ndị bu ụzọ. Ya mere, nnọchiteanya nke ọgbọ Z bụ ngwa ngwa zụrụ ma na-eche ihe organic na ụwa nke oge a na teknụzụ.
Erik Finman, otu n'ime ndị kasị ihe ịga nke ọma na-eto eto na ubi nke cryptocurrency, na 12 afọ chere atụmanya nke bitcoin. maka 6 afọ, o we me ya digital ọnọdụ 400 iberibe bitcoins, nke bụ ihe karịrị 4 nde ke dollar Ẹkot na nke ugbu a ọnụego. Na ya niile malitere na 2011 na $ 1000 echekwara na dinners na ụbọchị ọmụmụ onyinye. Bitcoin bụ mgbe uru $ 12.
site 2013, bitcoin toro nke ukwuu nke na ndị na-ere akụ nke Eric ahụ zuru ẹkedori a ọrụ ịchọ ndị nkụzi nke Botangle, nke o nwekwara mgbe e mesịrị ere bitcoins. Na-eto eto kaadị-enthusiast na-agaghị akwụsị ebe ahụ, na ya chere, bitcoin retains ego mkpesa, na ya bara uru nwere ike iru a nde dollar. The eto eto nde na-ekwere na oge a na usoro agụmakwụkwọ bụ kenchara, na YouTube na Wikipedia nwere ike ịkụziri ihe ndị ọzọ. Ọ ọbụna rụrụ ụka na nne na nna ya na ya ga-adịghị aga na mahadum ma ọ bụrụ na o nwere ike irite a nde dollar tupu eru ịghọ okenye. Ọ bụghị a ọjọọ ihe maka oge a na ọgbọ?
N'ezie, Eric Finman bụghị nanị ihe atụ nke a na-eto eto nkọ na cryptocurrencies. ya isi “ndorodoro” bụ Eddy Zillan, onye mbụ ghọrọ ndị nwere mmasị na kaadị-arụsi ọrụ ike ndị mmadụ na afọ 15. Ọ bụ nnọọ na nwata na-amalite a Coinbase na akaụntụ, ma Eddy akwụsịghị ya na ọ hụrụ a ụzọ gburugburu saịtị iwu. Ihe mbụ o mere bụ ịzụta Ethereum maka $ 100. Ọ bụ uru na-arịba ama na mgbe e nwere ndị na-ọtụtụ narị blọgụ na magazin, ọ dịghị onye pụrụ izi otú ime nke ọma. Agbanyeghị nke a, nwa okoro akwụ mbụ $ 10 maka a di na nwunye nke awa. Nke a nwere ike aghaghị iti ya, n'ihi na 10% awa ole na ole – magburu onwe uto. E mesịa, ọ nyekwara banyere $ 12 puku na crypt. N'ihi na a afọ ha na-eto ka $ 350 puku. Ugbu a Zillan bụ 18 afọ, o nwere a Pọtụfoliyo oké ọnụ ahịa karịa $ 1 nde na ọrụ nke aka ya, ize ike Cryptocurrency Financial.
ọzọ “Cryptoteenager” – Andrew Cory, 11-afọ, nwa akwụkwọ nke 6 ụdị jisiri dee banyere Bitcoin a dum akwụkwọ, nke ọ na-egosi ya ọhụụ nke zuru oke nke cryptocurrency na blockchain. The akwụkwọ, ikekwe nke ọdụdụ ọkachamara kryptovlyutam pụrụ ọbụna zụrụ on Amazon. The uru, n'ezie, ezubere bụ n'ihi na ụmụ, nke, Otú ọ dị, adịghị ekwu si ya mkpa. Andrew onwe ya nwere, dị ka ya, a obi umeala 0.02 bitcoins.
E nwere na-eto eto kaadị-enthusiasts na “ọjọọ ụmụ okorobịa”. Ya mere, na Bitcoin Platinum, ọtụtụ na-eduhie eduhie, na oru site a ntorobịa fraudster. Otú ọ dị, ọha na eze na-akwụ ụgwọ ntị na ya na oge, na o nwere na-ekweta na unfairness nke oru ngo. Dị ka ya, O zubere na-anakọta naanị $ 5,000.
O doro anya na, n'ọdịnihu ina ọkachamara na ubi nke digital aku na uba ga naanị eto. Na amaghị, site niile akaụntụ, na-agaghị ala azụ ma.
Nigel Green, CEO nke ...
Japan si kaadị Indus ...